April 3, 2022 by Martin6
Ridza ruzha rwako muchimiro nesarudzo yedu yeakanakisa ekumhanya mahedhifoni
Kumhanya kunokusundidzira panyama nepfungwa, saka zvakakosha kuti uve nemahedhifoni epamusoro anowanikwa kuti akupe iyo yekurudziro yeodhiyo inodiwa kusunda nemuvharidziro yemarwadzo uye kukwidza mamaira. Mahedhifoni akagadzirirwa kushanda anogovana maitiro mazhinji neayo akagadzirirwa kuenda kana kushandiswa kumba, asi kazhinji anosanganisira akasiyana maficha akagadzirirwa kuwedzera kushanda panguva yekurovedza muviri.
Kutsvaga kuti ndeapi maficha aunoda uye kuti imarii yekushandisa uchimhanyisa mahedhifoni hazvisi nyore, asi ndipo patinopinda. Takaisa pamwe chete gwara remahedhifoni anomhanya pamusika kuti aenderane nemhando yese yemumhanyi uye bhajeti - pamwe chete nemibvunzo yakakosha yaunofanira kubvunza paunenge uchitora peya.
Yakanakisa kumhanya mahedhifoni: Pakungotarisa
Yakanakisa bhajeti inomhanyisa mahedhifoni: Tribit Flybuds 3 | Tenga izvozvi
Yakanakisa bhajeti ine waya inomhanyisa mahedhifoni: Sony MDR-XB510AS | Tenga izvozvi
Yakanakisa-kudzima ruzha-inomhanyisa mahedhifoni: Apple Airpods Pro | Tenga izvozvi
Yakanakisa kumhanya mahedhifoni ehupenyu hwebhatiri: Adidas FWD-01 | Tenga izvozvi
Mahedhifoni anonzwika kwazvo ekumhanya: NuraLoop | Tenga izvozvi
Yakanakisa yechokwadi isina waya inomhanyisa mahedhifoni pasi pe £100: Jabra Elite Active 75t | Tenga izvozvi
Maitiro ekusarudza akanakisa kumhanya mahedhifoni iwe
Ndedzipi mhando dzemahedhifoni dzemitambo dzandinofanira kuwana?
Paunofungidzira uchimhanyisa mahedhifoni, ungangofunga nezve compact munzeve dhizaini uye ruzhinji rwezvigadzirwa pamusika ndizvo chaizvo. Nzeve mhando dzakashomeka zvakanyanya asi dzinogona kuve nemabhenefiti maererano nemhando yekurira uye hupenyu hwebhatiri. Nekudaro, ivo vane mhosva yekupisa nekudikitira kana wangotanga kuzvisunda, ndosaka maearbuds ari iwo sarudzo inonyanya kufarirwa.
Kana uchinge wasarudza pane zvakajairika, mubvunzo unotevera ndewekuti unoda here wired or Wireless mahedhifoni. Wired modhi hadzimbodi kuchaja izvo zvakanaka, asi kunze kwekunge mudziyo wako wekuteerera usina Bluetooth, isu tinowanzo kurudzira kuenda isina waya. Imhaka yekuti waya dzinogona kupinda munzira yako, uye kana ukabata netsaona tambo uchimhanya inogona kuburitsa nehasha munzeve dzako. Uyezve, mamwe mafoni emazuva ano haana 3.5mm jack, saka ungangoda kushandisa adapta kubatanidza mahedhifoni ako ane waya. Iro harisi dambudziko hombe, asi chimwe chishongedzo chekubata nacho.
Kana zvasvika kune mahedhifoni asina waya, pane maviri magadzirirwo ekusarudza kubva: unogona kuwana peya uko kuruboshwe nekurudyi zvikamu zvakabatanidzwa pamwechete, kana iwe unogona kuenda kune yakazara isina waya buds (inozivikanwawo se 'yechokwadi isina waya'). Iyo yekupedzisira iri nyore kumhanya, asi ivo vanowanzove nehupenyu hupfupi hwebhatiri zvichienzaniswa ne "zvishoma waya" vamwe vavo.
Imwe yekupedzisira dhizaini chinhu chaunofanirwa kufunga nezve ambient ruzha. Dzimwe mbozhanzeve dzinogara zvakadzika munzeve yako, iine plug yerabha isingabatanidzi ruzha rwekunze rwekunze. Izvi zvakanakira kuganhura uye kuzvirasa mumhanzi - asi kana uchimhanya mumigwagwa yakabatikana, funga nezve dhizaini yakavhurika inobvumira imwe ruzha mukati, kuti urambe uchibatana nenjodzi dzinogona kuitika dzekunze. .
Iwe unogona kubhadhara zvishoma se-£ 5 kune yekutanga mahedhifoni ane waya, asi mhando yekurira ingangove yakanaka tambo uye pane mukana wakanaka wekuti vapunzike pasina nguva. Iwe uchawana yakanyanya kunaka odhiyo, uye inovimbika zvakanyanya kuvaka mhando, kubva kune maviri ewaya mahedhifoni muiyo £ 20 kusvika pa50 renji.
Saizvozvo, iwe unogona kutora anoshanda ehedhifoni isina waya yepasi pe- $ 20 - asi mhando dzemhando yepamusoro dzinowanzo kuwanikwa mu-£ 70 kusvika pa-100 bracket. Kana zvasvika kune yechokwadi isina waya mahedhifoni, akanakisa seti ekumhanya anodhura £150 zvichikwira.
Ndezvipi zvakakosha zvekutsvaga?
Kudzivirira mvura: Chekutanga pane zvese, ita shuwa kuti mahedhifoni auri kutarisa ari dikita uye anodzivirira mvura. Kune akawanda emazuva ano mahedhifoni kunze uko asingapasa iyi bvunzo.
Fit: Izvo hazvina basa kuti mahedhifoni emitambo anonzwika sei kana achigara achidonha munzeve dzako kana achida kugara achigadziriswa. Kumhanya kunogona kusanganisira majoti akawanda uye zvirongo saka zvakakosha kuti mahedhifoni ako emitambo akwane nzeve dzako zvakanaka uye zvakachengeteka.
Battery upenyu: Zviripachena, iyi haisi nyaya yewaya dzemitambo mahedhifoni. Kumayunitsi asina waya, unogona kutarisira nguva ingangoita maawa masere kusvika gumi emimhanzi pamutengo. Echokwadi asina waya mabuds anowanzo kuverengerwa kwemaawa matatu kusvika mashanu chete ekutamba pachaji, asi izvi hazvisi zvekudzikamisa sezvazvinonzwika: mhando zhinji dzinouya nekesi yekutakura inopetwa sechaja, iyo inovakwidza kumusoro pakati pekushandisa. Mukuita, unogona kuenda vhiki kana maviri usina kuaisa mukati.
Ruzha rwemhando: Semutemo wakajairwa, mahedhifoni ane waya anopa yakanyanya kunaka kubereka (kunyanya pamusoro-nzeve dhizaini), nepo isina waya tekinoroji inogona kuderedza ruzha zvishoma. Usaregedzerwe, zvakadaro - ingoita tsvakiridzo shoma usati watenga kuti uone kuti maearbuds ako akasarudzwa anonzwika zvakanaka sezvaanofanira.
Chekupedzisira, zvakakosha kuti utarise wongororo kuti uone kuti inokurumidza uye nekuvimbika sei kubatana nefoni yako kana MP3 player - pane zvinhu zvishoma zvinoshungurudza kupfuura maearbud asingabatane, kana kucheka zvisina tsarukano iwe uri pakati pekumhanya. . Mahedhifoni mazhinji akachipa ane zvakanyanya kuomerwa neizvi kupfuura zvaungatarisira, asi iva nechokwadi chekuti mamodheru atatora pazasi haakurasire pasi.
VERENGA NEXT: Mahedhifoni epamusoro uye mahedhifoni aunogona kutenga
Iwo akanakisa kumhanya mahedhifoni kutenga
1. Tribit Flybuds 3: Yakanakisa bhajeti inomhanyisa mahedhifoni
Price: £ 40 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Kuedza kutsvaga seti yemahedhifoni asina waya epasi pe-£ 50 inogona kushungurudza, asi kana ukagumburwa nedhaimondi rakakasharara senge Flybuds 3 zvinoita kuti kutsvaga kwese kuve kwakakosha. Aya mahedhifoni e-£ 40 anogona kufananidza akawanda seti anodhura zvakapetwa kaviri kana katatu zvakapetwa, zvese maererano neaudio uye mhando yekuvaka, uye vane yakachengeteka yekumhanya yekutenda kune akasiyana mapapiro uye nzeve-matipi akapihwa mubhokisi.
Hupenyu hwebhatiri pamabuds hwakasimba zvakakwana pamaawa mashanu, asi nyaya yacho inoshamisa, ichiwedzera mamwe maawa makumi mapfumbamwe nemashanu ekushandisa uye kurongedza USB port iyo inokutendera iwe kuchaja zvimwe zvishandiso kubva mairi. Ruzha rwakajeka uye mabass ari punchy, uye kunyangwe pamavhoriyamu akakwira panenge pasina kukanganisa. Iine IPX95 chiyero, mahedhifoni zvakare haana mvura yakakwana. Iyo chete chaiyo isina kunaka kune mabuds ndiyo inowanzosapindura yekubata zvidzoreso, asi izvi zvinogona kuregererwa kune yemhando yemhando yauri kuwana ye £8.
Mafungiro akakosha - Chimiro: Chokwadi isina waya munzeve; Kudzivirira kwemvura: IPX8; Battery upenyu: 5 maawa (100 yakazara nekesi)
Tenga ikozvino kubva kuAmazon
2. Jabra Elite Active 75t: The best true wireless running mahedhifoni pasi pe £100
Price: £ 99 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Iwo Elite Active 75t mahedhifoni akatangwa kumashure kutanga kwa2020 asi, sewaini yakanaka, ivo vakangovandudza nezera, vachiwana zvinhu zvitsva zvinosanganisira kudzima ruzha. Uyezve, panguva yavanga vabuda, hapana imwe mhando yakakwanisa kuburitsa seti yemitambo mahedhifoni inovandudza Elite Active 75t.
Zvisinei nekusave nemapapiro, iwo-munzeve mabuds anogara munzvimbo zvisinei kuti kumhanya kwako kunotora nguva yakareba sei kana dikita, uye ruzha rwemhando yakasarudzika. Hupenyu hwebhatiri pamabuds hwakasimba 7.5 maawa pasina ANC activated uye ichiri-yakanaka 5.5 painobatidzwa, uye kune zvakare HearThrough mode yekuwedzera ruzivo rwezvakatipoteredza kana zvichidikanwa.
Iwo mabhatani ekudzora ari nyore kushandisa pakufamba, uye mushure memakore angangoita maviri ekugara tichishandisa isu hatisati tasangana nematambudziko ekubatanidza, neElite Active 75ts ichikwanisa kubatanidza kumidziyo miviri kamwechete uye kushandura zvisina musono pakati pawo.
Read yedu Jabra Elite Anoshanda 75t ongororo nokuti zvakawanda
Mafungiro akakosha - Chimiro: Chokwadi isina waya munzeve; Kudzivirira kwemvura: IP57; Battery upenyu: Maawa 7.5 (28 yakazara nekesi), maawa 5.5 (maawa makumi maviri nemana ane kesi) ANC pa
3. Sony MDR-XB510AS: Yakanakisa yakachipa wired inomhanya mahedhifoni
Price: £ 24 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Kunyangwe makambani mazhinji ari kusarudza kugadzira mahedhifoni asina waya, kuchine mamwe makuru ane waya anowanikwa uye Sony's MDR-XB510AS imwe yacho. Iwo ane IPX5-certified saka haasi chete anodikitira- uye anodzivirira mvura, asi unogona kuzvichenesa pasi pepombi kana wapedza kumhanya kwako.
Iyo MDR-XB510AS inoratidzira Sony's trademarked EXTRA BASS, iyo inopa yakazara, yakapfuma yakaderera-yekupedzisira kubereka uye mahedhifoni anouya akatakurwa neakasiyana-siyana-saizi eartips uye arc anotsigira kuti akubatsire iwe kuwana yakagadzikana inokwana munzeve yako. Iyo 1.2m tambo yakareba zvakakwana kuti uone kuti hauibate paunenge uchimhanya uye zvakare ine diki in-cable control bhokisi.
Inowanikwa nemavara mana akasiyana - dema, tsvuku, girini uye bhuruu - iyo MDR-XB510AS imhando yakanaka, inokwanisika sarudzo kune avo vasingade kuita kusvetuka kumahedhifoni asina waya.
Mafungiro akakosha - Chimiro: Wired earphones; Kudzivirira kwemvura: IPX5; Battery upenyu: N / A;
4. Shokz OpenRun Pro: Yakanakisa kumhanya mahedhifoni ekumhanya
Price: £ 160 | Tenga izvozvi kubva kuSelfridges
Shokz 'mhando yemabhonzo-conduction mahedhifoni ndiwo ega mahedhifoni anotenderwa kumijaho yemumugwagwa pasi peUK Athletics Rules of Competition. Izvi zvinovaita ivo ve de facto sarudzo kana iwe uri mumhanyi anokwikwidza asi vanomhanyawo zvavo vanozofarirawo mabhenefiti ekuitisa bhonzo tekinoroji.
Nenzeve dzako dzisina mahara, unogona kunzwa zviri kuitika zvakakupoteredza, bata nhaurirano uye njodzi yako yekubatwa nenzeve ine chekuita nemahedhifoni yakaderedzwa, zvakare.Inzwi remhando yemahedhifoni ekufambisa bhonzo haaenderane nemahedhifoni echinyakare asi OpenRun Pro ndiyo yakanyanya kunaka. -inonzwika sarudzo mumaitiro avo uye vane hurefu hwebhatiri hupenyu hwechero pfupa-conduction mahedhifoni zvakare. IP55 certification inoreva kuti vanogona kumira dikita uye kunaya uye kugadzikana kwavo kunogonesa kuti uvapfeke kwenguva refu yemujaho pasina nyaya.
Read yedu Shokz OpenRun Pro wongororo nokuti zvakawanda
Mafungiro akakosha - Chimiro: Wireless bone conduction; Kudzivirira kwemvura: IP55; Battery upenyu: 10 maawa
5. Apple AirPods Pro: Yakanakisa ruzha-kubvisa isina waya mahedhifoni ekumhanya
Price: £ 189 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Iwo AirPods Pro ndiwo ekutanga echokwadi asina waya mahedhifoni atakasangana nawo ayo anopa inoshanda ruzha kudzima (ANC) ukuwo iine yakachengeteka yakakwana yekumhanya. Ivo vakabva vangove yedu yekuenda-kune sarudzo yekumhanya semhedzisiro.
Pane mamwe mamiriro ezvinhu apo iwe usingadi kuti ANC ishandiswe paunenge uchimhanya - kana uri munzira yakabatikana, semuenzaniso - kuti ugone chinja kune iyo AirPods Pro's transparency mode, iyo inosefa nekunze ruzha kumimhanzi yako kuti uve. kuziva zvakakupoteredza. Nekudaro, kana iwe uchigonesa iyo ANC mufaro, ichiita kuti mimhanzi yako inyudze uye ichivharira kunze zvinotsausa zvepasi rakakutenderedza kuti utarise kumhanya kwako.
Ruzha rwemhando yeAirPods Pro yakanakisa kuvonga kune-munzeve dhizaini, uye iyo fit yakasununguka kupfeka kwenguva yakareba uku ichichengetedzwa zvakakwana kuti imhanye. Hupenyu hwebhatiri hwemabuds hwakasimba kwete hunoshamisa pamaawa 4.5 neANC yakagoneswa (unogona kuwana maawa mashanu kana ukaidzima), asi iyo yekukurumidza kuchaja chimiro, chinokupa awa yekutamba kubva pamaminetsi mashanu chete mune iyo kesi. , zvinoreva kuti haufe wakabatwa nejusi usati wamhanya.
Read yedu Apple AirPods Pro kuongororwa nokuti zvakawanda
Mafungiro akakosha - Chimiro: Chokwadi isina waya munzeve; Kudzivirira kwemvura: IPX4; Battery upenyu: 4.5 maawa (24 yakazara nekesi)
6. NuraLoop: Mahedhifoni epamusoro-anonzwika ekumhanya
Price: £ 179 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Nepo iyo NuraLoop yakagadzirwa nevaimbi mupfungwa kupfuura vatambi, aya ndiwo mamwe mahedhifoni akanaka ekumhanya. Zvishwe zvinovapa zita ravo zvinogadzira yakanyatso chengetedzeka yakwana pamusoro penzeve dzako kuitira kuti pasave nenjodzi yekuti maearbuds kubuda iwe uchifamba. Vanopa kurwisa-dikitira kuti vadzivirire kubva mukukuvadzwa panguva idzo dzakanyanya kubuda uye nehupenyu hwebhatiri hunokwira kwemaawa gumi nematanhatu kuchaja kwakaderera zvakanyanya pane nevazhinji vevakwikwidzi vavo.
Kwavanopenya zvechokwadi kuri mudhipatimendi rekuteerera. Uchishandisa tekinoroji ine patented, iyo NuraLoop inogadzira yakasarudzika chimiro chako chete, ine zvinoshamisa mhedzisiro. Yavo inoshanda ruzha-kubvisa zvakare yechipiri-kune-hapana. Kana iwe uchida kuvharira kunze kwenyika paunenge uchipedzisa mapeji akatenderedza paki, unogona, asi kune zvakare inoshanda yeSocial Mode, iyo inoita kuti iwe uwedzere kuziva zvakakupoteredza.
Read yedu NuraLoop wongororo nokuti zvakawanda
Mafungiro akakosha - Chimiro: Maearphone asina waya; Kudzivirira kwemvura: Hongu asi hapana IP rating yakataurwa; Battery upenyu: 16 + maawa
7. Jaybird Vista 2: Yakanakisa isingapindi mvura ichimhanya mahedhifoni
Price: £ 190 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Iwo Vista 2 buds ndiwo ari padhuze emakwikwi kuJabra Elite Active 75t kana zvasvika kune ese-kutenderera mhando, uye isu tichiri kuyera maJabras seakakwirira zvishoma (uye akachipa), iwo Vista 2 mahedhifoni ane mukana mumwe chete unova wakazara mvura. , IP68-yakatemerwa dhizaini. Chimwe chinhu chakanaka ndechekuti nyaya yacho ndeye IP54-yakatemerwa, saka inoramba mvura uye ziya kana ukaitsveta mubhandi rako rekumhanya kana bhegi wouya nazvo.
Jaybird yagara ichiita basa rakakura rekutarisisa kuenderana nemahedhifoni emitambo, uye ndizvo zvakaita maVista 2 buds, anouya ne "enzeve" matatu akasiyana, ari musanganiswa we nzeve-matipi nemapapiro anobvumira kuchengetedzwa kwakachengeteka. uye yakasununguka kukwana. Hunhu hwekurira hunokatyamadza zvakare, uye unogona kugadzirisa iyo EQ mune yekudyidzana app kuti ienderane nekuravira kwako, uye mabuds ane zvese ANC uye yekuziva maitiro.
Mafungiro akakosha - Chimiro: Chokwadi isina waya munzeve; Kudzivirira kwemvura: IP68; Battery upenyu: 8 maawa (24 yakazara nekesi)
8. Chinangwa Chakachena: Maearbud akanakisa akavhurika ekumhanya
Iyo Cleer Goal yechokwadi isina waya earbuds inoratidzira dhizaini inokweretesa pachayo zvakakwana pakumhanya. Ivo havashandise silicone eartips kuvhara nzeve dzako zvinoreva kuti unogona kuramba uchiziva nezvekwaunogara asi inoratidzira inobvisika "Freebit C-skirts" inogara munzeve yako yekunze uye inobatsira kuwana yakachengeteka kukwana.
Hunhu hweruzha hwakachena kwazvo nekuda kweiyo Goal yekugona kutaura nepakati uye treble. Kunyangwe dhizaini yavo yakavhurika-yakakwana, vatyairi veGoal's 14mm vanounza yakanaka bass thump, kunyangwe isina huwandu hwehupfumi hwaungawana nemabuds anosanganisira silicone matipi. Kubata kwekubata kunoitwa zviri nyore uye zvinobudirira. Kutamba, kumbomira, kusvetuka-svetuka uye kukwazisa mubatsiri wako wezwi kunoitwa nematepi kamwe chete, kaviri uye katatu, ukuwo kugadzirisa vhoriyamu kunoda kuti ubate kaviri uye ubate chigunwe chako pabud.
Maawa matanhatu ehupenyu hwebhatiri munzeve anotsigirwa nemamwe maawa gumi nemana ekuchajisa mukesi iri kuenderana uye kuyerwa kwekudzivirira mvura kweIPX14 kunoreva kuti Chinangwa chakashongedzerwa zvakanakisa kubata dikita nemvura kana ichirova mamaira.
Mafungiro akakosha - Chimiro: Chokwadi isina waya munzeve; Kudzivirira kwemvura: IPX4; Battery upenyu: Maawa matanhatu (maawa makumi maviri akazara nekesi yekuchaja)
9. Adidas FWD-01: Yakanakisa kumhanya mahedhifoni ehupenyu hwebhatiri
Price: £ 67 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Zvakaoma kuwana mhosva yakawanda neAdidas 'FWD-01 neckband Bluetooth nzeve. Nzvimbo yavo huru yekutengesa ihwo hupenyu hwavo hwebhatiri hwepamusoro, hunosvika kumaawa gumi nematanhatu kana kupfuura pakati pekuchaja. Kana ukakanganwa kuvabhadharisa, ivo vanopawo yakakurumidza USB-C kuchaja, zvichireva kuti unogona kuvakwidza kusvika makumi matanhatu muzana mumaminetsi gumi nemashanu chete.
Kunze kweizvi, takaona FWD-01 inonyatsokodzera kumhanya nekuti dhizaini yavo nemaune haigadziri chisimbiso chakakwana munzeve dzako. Izvi zvinoreva kwete chete kuti iwe unonyanya kuziva zvakakupoteredza paunenge uchimhanya asiwo iwe hauwane iyo inotsamwisa yekuwedzera yenhanho yega yega.
Zvisinei neizvi, maearbuds airamba akatsiga munzeve dzedu uye isu taida chaizvo mhando yemutsindo, zvakare. Sezvineiwo nemahedhifoni mazhinji anotungamirwa nemitambo, iwo ari bhoomy asi pane zvakawanda zvakadzama kuburikidza nepakati-renji ma frequency uye treble. Muchokwadi, yedu diki gripe ndeyekuti magineti anobata maearbuds pamwechete kana akaturikwa pamutsipa wako haana kusimba zvakanyanya. Pamwe chete nekushaikwa kwekubata kubva kune jira-yakavharwa tambo, kune njodzi yekuti vanotsvedza kana isiri kushandiswa.
Mafungiro akakosha - Chimiro: Maearphone asina waya; Kudzivirira kwemvura: IPX4; Battery upenyu: 16 + maawa
10. 1ZVAKAWANDA Dual Driver ANC Pro: Yakanakisa ruzha-kubvisa mitsipa yekumhanya
Price: £ 130 | Tenga izvozvi kubva kuOnBuy
Neckband mahedhifoni anogona kunge asiri kunyanya kufarirwa kushandiswa kwese asi akanyatsokodzera kumhanya uye aya mitsipa kubva ku1MORE ari pakati peakanakisa kutenderedza. Ivo vanounza yakanyanya kutsanangurwa odhiyo yekutenda kune yavo yakadzikama armature vatyairi uye inoratidzira maviri nhanho yekudzima ruzha - yakapfava uye yakasimba - kubatsira kudzikisa zvisingadiwe zvinotsausa kana vari munzira. Kune zvakare inobatika yemhepo inodzivirira ruzha, iyo inogamuchirwa zvakanyanya kana iwe uchimhanya munzvimbo ine mhepo. Iwe haugone kuve neyese ANC uye mhepo inopikisa kuramba inoshanda panguva imwechete, zvakadaro, zvinonyadzisa.
IPX5 certification inoreva kuti Dual Driver ANC Pro yakashongedzerwa zvakakwana kubata zvese mvura uye ziya, zvidzori zvemuhuro zvakagadzikwa zvakanaka uye machira emunzeve anokwana zvakanaka munzeve dzako, nekufamba kudiki kunyangwe uchimhanya uzere pellt. Zvese-mu-zvese, iwo edu nhamba yekutanga kurudziro kana iwe uri fan weiyo neckband maitiro uye uchida kugona-kudzima ruzha.
Mafungiro akakosha - Chimiro: Wireless neckband; Kudzivirira kwemvura: IPX5; Battery upenyu: 20 maawa
Tenga izvozvi kubva kuOnBuy
11. Bose Sport Earbuds: Mahedhifoni anogadzika zvakanyanya
Price: £ 149 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Tichifunga nezvemutengo wavo wakakwira, maBose Sport Earbuds anotaridzika zvishoma-asingaenzaniswi kana achienzaniswa nevanokwikwidza. Hupenyu hwebhatiri hune mwero pamaawa mashanu, hapana ANC, haugone kugadzirisa EQ, uye mwero wekudzivirira mvura unongova IPX4 chete - inokwana kumhanya mumamiriro ekunze ese, asi isina mvura yakakwana.
Nekudaro, izvo zvinoitwa neSport Earbuds zvakanaka, vanoita chaizvo. Kune imwe, inonzwika inonakidza, iine muviri wakazara asi inonzwisisika inonzwika chimiro. Kwemaviri, akasununguka uye akachengeteka kupfeka kwemaawa akawanda, izvo zvisiri izvo nguva dzose nemahedhifoni anoshandisa mapapiro. Kana iwe uchinetseka kuchengetedza-munzeve mahedhifoni munzvimbo, tsvaga mapapiro anorwadza kupfeka kwenguva yakareba uye usingade kushandisa mahedhifoni ehuku, iyo Bose Sport Earbuds inofanirwa kunge iri yako yepamusoro sarudzo.
Mafungiro akakosha - Chimiro: Chokwadi isina waya munzeve; Kudzivirira kwemvura: IPX4; Battery upenyu: 5 maawa (15 yakazara nekesi)
Hapana nzeve (1) vs. OnePlus Buds Pro: Ndeipi yaunofanira kutenga?
Iyo Razer Hammerhead Yechokwadi Wireless Pro inotungamira iyo bhodhi mumujaho weearbuds
Yakanakisa isina waya yemitambo mahedhifoni 2020: Iwo akanakisa asina waya mahedhifoni ePS4, Xbox One uye PC
Yakanakisa pfupa-yekuita mahedhifoni 2022: Yedu yatinoda yakavhurika-nzeve sarudzo dzekumhanya, kushambira uye kushandiswa kwemazuva ese.